FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #66
Sida ugu wanaagsan ee loo wada baran karo iyada oo aan ka wada hadalno waxa aannu ku samaynno FSX, sax?
Xeerarka 2 oo kaliya. maya muran (haddii ay jirto dhibaato ay ka qaadato meel kale, FADLAN); oo aan cidna ku farxin
LINKS in diyaarad ku taal goobta Rikoooo kaliya looma dhiirigelin, waxaan KU FADLAN KA YAHAY!
Waan jeclahay baaritaanka diyaaradaha kala duwan! Tan iyo markii aan ahaa ilmo.
Aniga naftayda ....... Waxaan ahay maamulaha shirkadda American Airways VA. Waqti badan ayaan ku qaatay waqtigayga FSX Inaad sameyso xamuul xamuul oo dheer maxaa yeelay taasi waa waxa lacagta ka dhigeysa Shirkadda Diyaaradaha. Labada shimbiraha ugu sareeya ee aan duulayaa waa 2-747F iyo 800LCF. Waxaan haynaa diyaarado waa weyn oo nooc kasta leh.
Ugu yar ee aan u maleynayo waa Dash 8-100 iyo Xayawaanka Hantida 600.
Ugu weyn ee aan u maleynayo inay noqon doonto 747s, iyo 707-320, iyo 777-200LR.
Boosting 314 iyo 707-320
Ugu dhakhsaha badan waa Concorde, iyada oo aan su'aal lahayn. (si aad u cadeeyo "Charlie", anigu ma doonayo inaan ku faraxsanaado haddii aan Mach-2 ku socdo [timaha] dabka "lol"
Si tartiib ah waa su'aal ka duwan V-22, iyo CH-47, oo kaliya waxaan u adeegsaneynaa shaqaalaha duulimaadka Batroolka Rig-gareerka (runtii caajis ah, laakiin dhakhso ah haddii la isticmaalo osprey heh)
Saaxiibkeyda shakhsi ahaaneed Taasi waa mid adag. Waa inaan sheegaa 707-320 iyo C-130.
Imisa jeer ayaan duuli karaa? Waa hagaag, inaad daacad u ahaato ... ku dhowaad aan joogsi lahayn. Ilaa hadda illaa bishan, waxaan kaydiyay saacadaha 461.39, iyo 206,931
Markaan u duulin duulimaadka, waxaan badanaa ku duulayaa Tomcat.
Qaar ka mid ah isku xirka qaar ka mid ah shimbiraha Rikoooo aan isticmaalo
B747-XXX xirmo Mega (Waxaan isticmaalaa LCF tan - inkastoo aan leeyahay ALL Mashruucyada 747 rakibay lol)
AMA HADDII aad rabto oo kaliya LCF ...
B737-700 American Airways (MA JIRA WAXA LAGU QAADAYAA filimkayaga laakiin waan haystaa oo waan jeclahay)
B777-200 (anigoo aan isticmaalin mid ka mid ah kuwa ku jira baakadkan ... ILAA WAADIRI KARAA!)
B707-42 (Waxaan isticmaalaa Kabta Sim Sim, laakiin waxay isku dayeysaa midkan midkan usbuucan!!
FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #69
Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo dhawr waxyaabood. Marka hore runti waa khalad soo ifbaxay ka dib markii aan isku dayay inaan rakibo muuqaalka Sim Giants Gran Canaria. Qaladku waa aagga baarista (oo leh lambarro) lama helin. Feylka muuqaalka muuqaalku aniga kama shaqeyso FSX sp2. Waa laga saaray laakiin qaladku wali wuu jiraa.
Labaad. Miyaa suurtagal ah in la isku daro VC-ka A320 xirmo kala duwan oo badan, oo leh Thomas Ruth A330 / 340 iyo sidee? Labadaba laga soo dejiyey halkan.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray Dariussssss.
FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #72
Waad ku mahadsan tahay Gh0stRider203 ee aad u dirto boostada, waannu kuugu waynaa waxoogaa ah hadda, waxaana soo dhaweynaynaa sidii golaha loogu talagalay.
Dariusssss: Si meesha looga saaro qaladka waxaad si fudud uga saari kartaa muuqaalka buugaagta maktabadaada muuqaalka ah gudaha FSX kadhig. Waxaan eegi doonaa muuqaalka si aan u hubiyo inuu qalad ku jiro rakibka. miyay ku dhacdaa oo keliya Grand Canary ama seenyooyinka kale?
su'aashaada labaad, haa waxaan u maleynayaa inaad ka mid noqon kartid VC-ka A320 xirmo kala duwan oo badan, oo leh Thomas Ruth A330 / 340. Si aad u sameysato VC-fadlan fadlan ka hubi google ama Youtube tutorials
FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #73
Waxay raadineysaa goobaha qurxinta 117 iyo 123. Labaduba ma joogaan. Muuqaalka .fg, goobaha ugu dambeeya waa 115-Ku darso riwaayadda, ma jiraan wax walba, laakiin qaladku wuu sii socdaa. Taasi waa faylka kaliya ee muuqaalka sameeya ee dhibaatooyinka keena, ilaa hadda.
Sidoo kale, BN-2 Islander for FSX si xun ayaa loo jabay.
FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #95
Ka dib markii isku dayay in la isku daro VC-da la xusay iyo Thomas Ruth A330, natiijadu waxay ahayd mid xun. Waa inaan ka saaraa mid ka mid ah A330s, waxaa si xun u jabsaday. Ma doonayo inaan siiyo fikradda ah in la isku daro laakiin, ma heli karo habab aan ku sameeyo.
FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #97
Dariusssss ayaa qoray: Ka dib markii isku dayey in la isku daro VC-da la xusay iyo Thomas Ruth A330, natiijadu waxay ahayd mid xun. Waa inaan ka saaraa mid ka mid ah A330s, waxaa si xun u jabsaday. Ma doonayo inaan siiyo fikradda ah in la isku daro laakiin, ma heli karo habab aan ku sameeyo.
guys c'mono..you're derailing i thread halkan
Farsamooyinka Tech waa halkan: www.rikoooo.com/board?view=topic&catid=5&id=34 :P
FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #99
OK waan ka xumahay, xumahayga.
FSX adigana sano 3 5 bilood ka hor #130
Dariussssss ayaa qoray: OK waan ka xumahay, waa xunahay.
Wax walwal ah Ninkeygu, waxaan helay diyaarado jilicsan oo aad nadiifin kartid
FSX adigana sano 3 4 bilood ka hor #177
Salaan dhamaantiin, waxaan ahay madaxa shaqaalaha USAF ee howlgab ah / waxaan duuliyaa inta badan MATS aka ciidamada duulista Hawada Milatariga / C97 ayaa ah kuwa aan jeclaa. Waxaan sidoo kale duullimaadyada Reeve AA ka duulayaa Alaska iyo jasiiradaha Aleutian The Lockheed L-I88 Electra Waa diyaaradayda aan aad u jeclahay ee waqooyiga fog. Waxaan ahay taageere weyn oo ka ah Convair the B-36, The B-58 Hustler ugu fiican ee u muuqda Bomber waligiis inuu duulayo / iyo Ganacsiga 880/990 diyaarado xawaare qurux badan. Waxaan u duulayaa Capsim 707 & 727 cabsi add-ons si fiican u qalma qiimaha. Kaliya waxaan haystaa ku dhawaad ​​80 saacadood oo sim ah ilaa iyo hadda barashada iyo ku celcelinta dariiqooyinka mar walba ..
FSX adigana sano 3 4 bilood ka hor #183
Marka ugu horeysa FCAIR .... Waxaan kuugu mahad celineynaa adeeggaaga dalkeena. Qoyskaygu waxa uu u adeegi jirey 6 hadda, ee ku saabsan laan kasta, laakiin Coast Guard. Eraygiina ma dhicin karo weligay inaan kuu mahadceliyo. Waxaan doonayay in aan u adeego, lakiin murugo, waxay ku koobnaayeen baaskiilada madaniga ah (oo aan ku riyaaqay illaa dhammaadka kuleylka).
Waxaan sidoo kale helay CS 707 iyo JAWA. Bilaabista 'waa wax aan weli ku qancin lmao weli waa in ay soo jiidaan buustaan ​​video youtube ah CS C-130 waa sheeko kale sheeko
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.312